ขายบ้านใกล้ เกษตรตัดใหม่ รามอินทรา เสนา พร้อมอย่ ตกแต่งใหม่ทั้งหลัง ต่อเติมโรงรถ ต่อเติมค | DDHomeLand
ขายบ้านใกล้ เกษตรตัดใหม่ รามอินทรา เสนา พร้อมอย่ ตกแต่งใหม่ทั้งหลัง ต่อเติมโรงรถ ต่อเติมค
หน้าแรก » ภาคกลาง » กรุงเทพ » ลาดพร้าว
โดย บุญเกียรติ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ4ม.ค. 2553.
ขายบ้านใกล้ เกษตรตัดใหม่ รามอินทรา เสนา พร้อมอย่ ตกแต่งใหม่ทั้งหลัง ต่อเติมโรงรถ ต่อเติมครัวใหม่ ห้องน้ำใหม่ ปูพื้นใหม่ ทำฝ้าเพดานใหม่ เดินน้ำไฟใหม่ทั้งหลัง ถนนหน้าบ้านกว้าง 8 เมตร เจ้าของขายเองครับ 0818550856
ติดต่อ: บุญเกียรติ อีเมล์:
ต้องการ: ขาย ราคา: 1,570,000
โทรศัพย์: 021252023,0818550856 จังหวัด: กรุงเทพ
คำค้น: บ้านหลุดดาวน์ ย่านเกษตรตัดใหม่ | ต่อเติมหน้าบ้าน | บ้านหลังเล็กต้องการต่อเติม | မြန်​မာစာတန်းထိုး ဇာတ်​ကား | ကာမ ရုပ်ရှင် ဖူးကား | မြန်​မာစာတန်းထိုး တရုတ်​သိုင်းကား | ကာမ အန်​တီ | ကာမ ရုပ်ရှင် | မြန်​မာ​အောစာအုပ်​အသစ်​ | မြန်​မာစာတန်းထိုး ဇာတ်​ကားများ |
សិចនិយាយខ្មែរ မိုး ဟေကို အေားကား অান্টি မိုးပြည့်ပြည့်မောင် အေားကား សិចនិយាយខ្មែរ សិចនិយាយខ្មែរ မိုး ဟေကို အေားကား অান্টি မိုးပြည့်ပြည့်မောင် အေားကား ขายบ้านปราจีนบุรี 304 ဇွန်သဉ္ဖာ photo s ဖင်​အိုးများ စိတ်အမောပြေ 18+ တရိဆန် ขายบ้านปราจีนบุรี 304 ဇွန်သဉ္ဖာ photo s ဖင်​အိုးများ စိတ်အမောပြေ 18+ တရိဆန် ကာမစာ​ကောင်း​ကောင်း အင်္ဂလိပ်​ လိုးကား လီး ကိုဒိုးလုံး ကိုးရီးယားဖူးကား ကြာကူလီ ဘုန်းလျှံ​အောကား tzမြန်မာအိုးphoto လူရမ်းကား အောစာအုပ်များ ကိုးရီးယားဖူးကား ကာမစာ​ကောင်း​ကောင်း အင်္ဂလိပ်​ လိုးကား လီး ကိုဒိုးလုံး ကြာကူလီ ဘုန်းလျှံ​အောကား tzမြန်မာအိုးphoto လူရမ်းကား အောစာအုပ်များ လိင် ၀တ္ထု ထက်​ထက်​မိုးဦး​ဆောက်​ဖုပ်​ ထိုင်းလိုးကား